musha nyika dzakabatana WWE Superstars Daniel Bryan Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerica wrestler wrestler uyo anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita "American Dragon".
Yedu Daniel Bryan Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwesimba reWWE nyeredzi kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yezvinyorwa zvinodada zvikuru muWWE.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveBiography yaDaniel Bryan, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Daniel Bryan Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Bryan Lloyd Danielson akaberekwa musi we 22nd waMay 1981 kuAberdeen muWashington, US
Akazvarwa kuna amai vake Darlene Jean Danielson (murapi) uye kuna baba vake Donald Orrin Danielson (logger).
Unoziva here?… Bhati Bryan akagara akanyaradzwa mudumbu raamai vake kwemwedzi ye10 asati asunungurwa kunze kwenzvimbo yake yekunyaradza.
Mudiki Bryan akakurira kuAberdeen pamwe chete nasisi vake mukuru Billie Sue Deck. Vamwe vake vanun'una vanosanganisira Jason Brown, Kelly Marlene Sutera & Jeri Ann Nagala.
Kukura muAberdeen, Bryan aiva mwana akanyarara uye anonyoresa uyo akanga ane rutivi rwakamanikidzika kumunhu hwake.
“Muenzaniso wababa vangu unowirirana pane izvi unobatanidza makuki. Aigara achitaura nezve nguva ino yandaitsvaga kuki uye akandiudza kwete.
Ndakasvika futi and my dad slapped my hand, then again said no. Ndakatanga kuchema asi ndakaramba ndichisvika kuki.
Nguva imwe neimwe baba vangu vairova ruoko rwangu zvishoma, uye nguva yega yega ndaichema zvakanyanya ”.
Bryan ane chido chekuomesa musoro.
Wrestling prodigy uyo aizivikanwawo semunhu anondandama (panguva iyoyo) anga asina akanakisa ehuhwana zviitiko sezvo vabereki vake vakarambana achiri mudiki kwazvo.
Iye, zvakadaro, akasimuka pamusoro pehukama hwehukama hwakabatana uye akatarisana nehupenyu-sevana kubva kumisha isiri-yakaoma.
Daniel Bryan Dzidzo:
Kudzidza kwaBryan kana kudzidza kunosanganisira zvidzidzo zvake kuAberdeen-Weatherwax High Chikoro. Ndichiri kuchikoro Bryan aive mutambi aikwikwidza mumitambo yakasiyana siyana kusanganisira nhabvu.
Paakapedza chikoro chesekondari mu1999, Bryan akakurumidza kufunga pfungwa dzake kuti aite basa mukurwa uye akakurumidza kufambira mberi kwake mumutsara iwoyo.
Kumira kwekutanga pabasa rake kuvaka kwaive kuyedza kwake kudzidzisa pachikoro cheDean Malenko chekurwa icho chakazovharwa.
Akazoenda kunodzidzisa kuTexas Wrestling Academy pasi paShawn Michaels naRudy Gonzalez vasati vaisa chibvumirano chebudiriro neWorld Wrestling Federation (WWF) ikozvino World Wrestling Entertainment (WWE) mugore 2000.
Daniel Bryan Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
WWF yakatumira Bryan kuMemphis, kwaakadzidziswa negamba remutsimba William Regal.
Paive paMemphis apo Bryan akanyora kukunda kwake kwekutanga kwakakunda nekuhwina light Heavyweight Championship uye akatumidzwa zita rekuti "American Dragon" mukubvuma kutsamwa kwake mumhete.
Bryan aizoita, mushure mekupera kwechibvumirano chake chebudiriro, anoenderera mberi nekurwa mukusimudzira kwakasiyana zvinosanganisira Frontier Martial-Arts Wrestling muJapan uye Ring of Honor (ROH) pakati pe2002-2009.
Akapihwa kugona kwakakosha kwekuhwina ROH World Championship muna 2005, Bryan akasainira WWE ndokuonekana neRin of Honor.
Daniel Bryan Biography - Kubudirira Nhau:
Chikwata cheBryan chokutanga neWWE hachina kutamba zvakanaka nekuda kwekuti mafiro ake ane nyeredzi seMiz uye John Cena yakaguma yaona manotsi echisimba ayo aikanganisa mipimo yevaraidzo.
Akazoburitswa kuti agadzirise masitayera anogamuchirwa mune mamwe maseti ewrestling.
'Iyo American Dragon' yakadzokera kuWWE pasina nguva refu muna 2010 uye yakadzingwa muchidimbu nekuda kwekuita zvechisimba paTV.
Bryan zvakadaro akadzoreredzwa gore rinotevera (2011) uye akanyorerwa kuSmackDown kwaakarova varwi vakati wandei kuti atore World Heavyweight Championship yake kubva kuMari muBank manera mechi.
Daniel Bryan Hukama Hupenyu:
Daniel Bryan murume akaroora. Tinokuunzira zvakadzama nezve hupenyu hwake hwewanano kusanganisira masanganiro aakaita nekusaroora waairoja naye wrestler akazova mukadzi, Brie Bella.
Bryan naBrie vakatanga kufambidzana mushure mekunge vese vatamba mitambo pamwe chete paWWE storyline pamwe chete panguva yechiitiko cheMuvhuro Night Raw munaNovember 2010.
Akakunda mutsara wezvenhau uye akapembererwa naBella. Vakaroorana vakatevera vakava vaviri vanovhiringidzika kwemakore matatu akatevera.
"Chaizvoizvo, yakanga ichangobva kupera nyaya yedu yenyaya yakatipedza isu takatanga kutanga kudanana. Isu takaita sekutanga kunonoka, asi ikozvino tave pamwe kwemakore maviri nehafu '.
Akati Bryan wehukama hwavo mu2013.
Vaviri vakaroora musi we 11th yaApril 2014 uye vakave nemhemberero inofadza kuAuberge Resort uye Spa muSedona, Arizona.
Sangano ravo rakakomborerwa nemwanasikana, Birdie Joe Danielson akaberekwa muna May 2017. Hazvizove nguva refu mhuri isati yawedzerwa kuwedzerwa kumwe sezvo Bryan anoda vana vaviri.
Daniel Bryan Biography - Untold Basa Rechokwadi:
Daniel Bryan na CM Punk ndivo chete varume muindasitiri yewrestling vakahwina vese WWE Championship uye iyo ROH World Championship.
Bryan aifunga kushandisa mazita emutambo weird akadai "Buddy Peacock" uye "Llyod Boner" asati agadzirisa "Bryan Daniel".
Wrestler akaita maitiro mashomanana severedzi yeTV, nekuda kwomukadzi wake nguva dzose paE! network network real series Total Divas.
Iye akarega basa kubva mutsimba muna 2016 nekuda kwehutano matambudziko akasimbiswa kubva mukukuvara uye akapihwa isiri-yekurwa basa mwedzi yakati gare gare seGeneral Manager weSmackDown anorarama.
Nekukurumidza kumberi kuna Chivabvu 2018 Bryan akave akasimbiswa zvemushonga akakodzera kuti adzokere mu-mhete makwikwi.
Nepo varwi vazhinji vachizivikanwa nenziyo dzekupinda, Bryan anozivikanwa ne "Hongu Chants" yaakaita muna 2014 mushure mekurova Kofi Kingston.
Nziyo dzakazotevera kuve dzakakurumbira mune mimwe mitambo yeprojekiti seNBA uye yaishandiswawo mushandirapamwe wezvematongerwo enyika.
Daniel Bryan Hupenyu hweMunhu:
Bryan akanga ari wechikamu chiri nani chebasa rake remutsimba, mutsimba ane unyanzvi uyo ainetseka nechinetso chokudenha. Chivimbo ndechekuti, akanetseka nekusava nehunyanzvi hwekutaura.
Iye, zvisinei, akasvika pakuziva kuti kufanofungidzira kwake kwakanga kuri chimwe chezvakavanzika zvakawanda zvoupenyu. Yakanga iri imwe yakamuita kuti ave akasiyana kana achienzaniswa nevamwe vake vane shasha. Vanhu ava vanowanzodyisa simba pese pavanenge vachiiswa munzvimbo inoonekera.
Hupenyu hwagara hwave bhegi rekushamisika kune imwe nguva yemuriwo. Tichifunga nezverwendo rwake rusingafungidzirwe kubva kune akawanda akazvimirira ekusimudzira. Uye zvakare kune chiitiko chikuru chekurwa mania.
Nekuda kweizvozvo, hazvitore zvakawanda kuita kuti mutambi ane hushamwari hwemhuka afare. Kunyanya sezvo achirarama hupenyu husina tarisiro. Ndiye munhu anotora zuva rimwe nerimwe sezvarinouya uye anoita zvaanofarira.
Iye anozvitsanangura ezvemamiriro ekunze haagone kunyura kana kushambira nekuda kwekukuvara kusingagadzirisike pazeve dzake mushure mekurwa muna 2007.
Iye, zvakadaro, anofarira zvimwe zvekuzvivaraidza zvinosanganisira kuona mafirimu/ tv nhepfenyuro, kutamba nhabvu nemitambo yemavhidhiyo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Daniel Bryan Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!